Isipho Esivuyisayo Sabathunywa Bevangeli—Amatikiti Enqwelo-moya Ayi-19 000
Isipho Samatikiti Enqwelo-moya Ayi-19 000
NgoJulayi 2013, iQumrhu Elilawulayo lamaNgqina kaYehova labhalela abathunywa bevangeli nabanye oovulindlela abakhethekileyo abakhonza kumazwe akude ileta eyabavuyisa ngokwenene. Le leta yayithetha ngelungiselelo lokunceda aba bazalwana ukuba baye kwiindibano zengingqi nezamazwe ngamazwe ezaziza kuba ngo-2014 nasekuqaleni kuka-2015.
Injongo yeli lungiselelo yayingekokubanceda ukuba baye endibanweni nje kuphela, kodwa babeza kutsho bakwazi ukuchitha ixesha neentsapho zabo kunye nabahlobo. Kule leta kwathiwa intlangano iza kubabhatalela amatikiti okuya nokubuya.
Nakubeni kwakungaqalwa ukwenziwa ilungiselelo elinje, kodwa kulo nyaka kwakuza kwenziwa into eyahlukileyo. ISebe Lezohambo LeKomkhulu Lehlabathi elisandul’ ukusekwa laliza kuthenga amatikiti phantsi kolwalathiso lweKomiti Yokufundisa YeQumrhu Elilawulayo.
Kungekudala emva kokuba loo leta ithunyelwe, zagaleleka izicelo zamatikiti kweli sebe. Kwathi kufika uJanuwari 2014, zabe sezingasabaleki ezo zicelo. Iqela elalabelwe ukwenza la malungiselelo lathenga amatikiti oovulindlela abakhethekileyo abasehlabathini lonke.
Amatikiti okuya kwezinye iindawo kwakungekho lula ukuwafumana. Oovulindlela abasuka eReykjavík, eIceland, kwakufuneka baqale eCochabamba, eBolivia. Abanye abasuka eNouméa, eNew Caledonia, kwakufuneka bafumane iinqwelo-moya eziya eAntananarivo, eMadagascar. Abanye bakhwela ezisuka ePort Moresby, ePapua New Guinea, zisiya eSeattle, eWashington, eMerika, ukanti abanye babeza kusuka eOuagadougou, eBurkina Faso, baye eWinnipeg, eKhanada.
Iqela labantu abahlanu elisebenza kwisebe leKomkhulu Lehlabathi Elijongene Nohambo lathenga amatikiti ayi-19 000. Lisebenzisa iminikelo yolu hambo ethunyelwe ngamabandla, loo matikiti lawathumela kubazalwana noodade abamalunga ne-4 300 abakumazwe ayi-176.
Eli lungiselelo laxatyiswa kakhulu. Esinye isibini esingabathunywa bevangeli sabhala senjenje: “Namhlanje sibuyela kwisabelo sethu kuMzantsi-mpuma weAsia. Sibulela ngokungazenzisiyo ngoncedo lwenu ukuze sikwazi ukuya eNgilani, ilizwe esazelelwa kulo, size sibe kunye neentsapho nezihlobo zethu emva kweminyaka emihlanu sabagqibela. Ngesingakhange sikwazi ukuza apha ngaphandle kweli lungiselelo. Sibabulela ngokuphuma kumazants’ entliziyo bonke abo babangele ukuba liphumelele.”
Umthunywa wevangeli okhonza eParaguay wabhala wenjenje: “Mna nomkam sifuna ukunibulela kakhulu ngelungelo enisiphe lona lokuya kwindibano yezizwe ngezizwe eNew Jersey, eMerika. Ekuqaleni kuka-2011, saceba ukuya kubona ikomkhulu lehlabathi eMerika. Sasinemadlana esasiyigcinele ukuya apho. Kusenjalo, ngoJuni waloo nyaka safumana isimemo sokuya kutyelela amabandla entetho yezandla eParaguay. Oko kwakuza kwenza ukuba sihle sinyuka. Emva kokuba sicingisise kakuhle ngale nto, sagqiba ekubeni singabi saya eMerika, kunoko sithenge imoto eyayiza kusinceda kweso sabelo sethu sitsha. Sisajonge leyo, safumana isimemo sokuya kwindibano yezizwe ngezizwe. Latsho lazaliseka iphupha lethu! Simbulela ngokungazenzisiyo uYehova ngokulunga nothando asibonise lona.”
Sisebenzisa ie-mail esinye isibini saseMalawi sabhala sathi: “Enkosi kakhulu ngento enisenzele yona! Siyayicinga indlela enisebenze ngayo, ixesha nemali eniyichithileyo kula malungiselelo. Siyixabisa kakhulu indlela enisebenze nzima ngayo, ngaphezu koko, sibulela intlangano kaYehova ebangele ukuba sonke sikwazi ukuya kwindibano yezizwe ngezizwe emakhaya size sichithe ixesha neentsapho nabahlobo bethu.”
Abazalwana noodade abasebenza kwisebe leKomkhulu Lehlabathi Elijongene Nohambo babewuthanda lo msebenzi. UMileivi wathi: “Ukunceda abathunywa bevangeli baye kubona iintsapho nabahlobo babo emakhaya yayingumsebenzi okhetheke ngokwenene.” UDorise wongezelela ngelithi: “Wandinceda ndabona indlela intlangano ebathanda ngayo abo bakhonza kwamanye amazwe.” Kanti yena uRodney, ovelela eli sebe wathi: “Kundivuyise ngokwenene ukubandakanyeka kulo msebenzi.”
Ehlabathini lonke amaNgqina kaYehova alivuyela ithuba lokwenza umnikelo wokupha abazalwana noodade abasebenza nzima nabazincamileyo.
mailto:?body=Isipho Samatikiti Enqwelo-moya Ayi-19 000%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D502015536%26wtlocale%3DXO%26srcid=share⊂ject=Isipho Samatikiti Enqwelo-moya Ayi-19 000